July 26, 2016 - Written by admin
Berbera(Saxilnews.com)-Madaxweyne Axmed Siilanyo iyo Wafti uu hogaaminayo ayaa saaka jarmaade kuyimi tuulada Xamaas oo galbeedka kaga beegan magaalada Berbera Masaafo 40km ah, waxaanu Madaxweyne Siilanyo dhagax dhigay dib udhiska Jidka laamiyada ah ee isku xidha tuladaas Xamaas Iyo Hargeysa oo masaafo dhan 70km dib udhis lagu samayn doono.
Madaxweyne Axmed Siilanyo oo in kayar hal minit la hadlay Saxaafada ayaa umahad naqay Sanduuqa horumarinta Somaliland ee magaciisa loosoo gaabiyo SDF iyo Wadamada lacagaha deeqaha ah kusoo shuba ee ay kamidka yihiin Denmark, Uk, Norway Iyo Nethrlands.
Kadib markii Madaxweynaha iyo waftigiisu ka laabteen Tuulada Xamaas ee ay ujahaysteen dhinacaas iyo caasimada Hargeysa ayaa waxa jidka laamida ah ee Tuulada Lafaruug dhexmara taayiro ku gubay haween ka gadoodsan Xukunkii doraad maxkmada Ciidamadu ku riday eedeysanayaashii loo haystay Dilkii Taliyihii qeybta Gobolka Saaxil Marxuum Cabdirisaaq Caseyr oo horaantii dabley hubaysani ku dishay Buuralayda biyoolay oo katirsan gobolka Saaxil raga la xukumay oo dhamaantooda kasoo jeeda Gobolka Saaxil ayaa la sheegay in aan cadayn buuxda lagu helin oo xukunkaasi layskaga rida waa sida uu ku dooday Garyaqaan Maxamed Jaamac cabdi oo ahaa qareenkii udoodaayay rag dilka lagu xukumay oo 8 nin ah iyo sagaal kale oo uu kujiro Gudoomiye Kuxigeenkii Gobolka Saaxil Xaamud Xuseen cabdillahi oo iyagana lagu riday xukuno xadhig kala duwan ah oo ubadan xadhig dheer oo todoba sanadooda ah.
Mudaharaad taayirada lagu gubay ee Tuulada Lafa ruug ayaa waxay Ciidamada Ilaada Madaxtooyada iyo Kuwo Boolis ah ee waftiga Madaxweynaha la socday uxidh xidheen 16 ruux oo isugu jira haween iyo dhalinyaro la sheegay inay taayiradaas ku gubeen wadad uu Madaxweyne Siilanyo iyo waftiga uu hogaaminaayay marayeen kuwaas oo ay kamid ahaayeen afar wasiir oo katirsan xukumadiisa. sidoo kalena sida sawieradan ka muuqata waxa si deg deg ah loo bakhtiiyay taayiradii laamiga ka gubanaayay oo loo adeegsaday biyo badan oo lagu bakhtiiyay
Dadka la xidhdidhay ayaa loo dhaadhiciyay dhinaca magaalada Hargeysa iyada oo la raaciyay waftigii Madaxweynaha.
Sikastaba ha ahaatee mudaharaadkan keenay in taayirada lagu gubo Wadada Madaxweyne Siilanyo maraayay ayaa dad goob joogayaal ah oo aanu wax ka weydiinay sheegeen inay daba socdaan mudaharaadadii Ilaa shalay ka soconaayay guud ahaan gobolka Saaxil maanta ugudbay Xarunta gobolka togdheer ee burco kuwaas oo lagaga soo horjeedo Xukunkii Maxkmada Ciidamada Somaliland ku riday Ragii ku eedeysnaa dilkii Taliyihii Qeybta Gobolka Saaxil Marxuum Cabdirisaaq Caseyr